शहरका फोहर संकलक - Pradesh Today शहरका फोहर संकलक - Pradesh Today
शहरका फोहर संकलक
मङि्सर २३, २०७५ सपना बोहरा
घोराही, २३ मंसिर ।
नामः पुनाराम विक
समाजले दिएको उपनामः ‘भंगी’ फोहर फाल्ने मान्छे
ठेगानाः घोराही उपमहानगरपालिका १८ रझेना ।
हो, उनलाई समाजले ‘भंगी’ उपनाम दिएको छ । कारण हो उनी घोराही बजारका फोहर फाल्ने काम गर्छन् । उनलाई शहरका फोहर फालेकै कारण उनलाई ‘भंगी’ नाम दिएको छ । ‘सम्मान कस्तो हुन्छ थाहा छैन्, शहरका शिक्षित मान्छेले नै फोहर फाल्ने ‘भंगी’ आयो भन्दा मुटु चसक्क हुन्छ’ घोराही बजारमा सरसफाई काम गर्दै आएका विकले निरास हुँदै भने । बिहानी घामको किरण शहरमा नपुग्दै विक बजार सफा गर्न पुग्ने विकलाई फोहर फाल्ने भंगी भनेर बोलाएको सुन्दा ज्यादै नराम्रो लाग्छ रे ! उनलाई ।
२०५४ सालदेखि घोराही बजारका सडक अनि गल्ली सफा गर्दै आएका विक कहिले सडकमा मरेका कुकुर फाल्ने काम गरे भने कहिले मरेका गाई गोरुलाई गाउँका कुनै जंगलमा लगेर गाड्ने काम समेत गरे । त्यतिमात्रै होईन् नालामा फ्याँकिएका डुङडुङती गन्हाउने मानिसका लाससमेत निकाल्ने समेत गरे । ‘सडकमा मासुदेखि कुकुर, गाई, गोरु म¥यो भने हप्ता दिनसम्म डुङडुङती गन्हाउदा पनि कसैले उठाउदैनथे’ बिगत सम्झदै भने ‘सबैले नाक छोपेर हिड्थे, तर मैले सडकबाट हटाउँथे ।’ शुरुका दिनमा त उनले सडकका फोहर उठाएपछि कति दिन त खानै नखाएर सुते । ‘फोहर उठाएर गएपछि उल्टी आउने जस्तो हुन्थ्यो’ उनले विगत सम्झदै भने ‘कति दिन त भोकै सुते ।’ यी काम गरेवापत उनलाई समाजले ‘भंगी’ उपनाम दियो । शुरुका दिनहरुमा त उनले घोराहीका मुख्य सडकहरु बढार्ने समेत काम गरे । ‘दश वर्ष अगाडि घोराही बजारका सडक बढारेर घर फर्किने बेला म पुनाराम हो की होइन् भनेर आफैलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्थ्यो’ परिवार मलाई देखेर अचम्म मान्ने गर्थे’ उनले भने । फोहर फाल्ने काम गरेकै कारण उनलाई पार्टी, पिकनिकमा जान बन्देज जस्तै थियो । ‘भंगी’ आयो भनेर पार्टी तथा पिकनिकमा छुट्टै टाढा बसालेर खुवाउने गर्थे’ उनले विगतको तितो सत्य बताउदै भने ‘कार्यालयकै स्टाफबाट यस्तो अपमानित हुँदा निकै मन दुखेर आउँथ्यो ।’
सबैले ‘भंगी’ भन्दा शुरुका दिनमा चिनेको मान्छे देख्दा नदेखेको जस्तै गरेर हिड्ने, रुमालले मुख छोप्ने कामसमेत गरे । शुरुका दिन विना पञ्जा शौचालय सफाई गर्नुपर्ने, मास्कबिना सडक बढार्नु परेको उनले बताए । तर पछिल्लो समयमा उनी ‘भंगी’बाट फोहर फाल्ने अनि कसै कसैले सरसफाईकर्मी भन्ने गरेको बताउँछन् । बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म घोराही बजार सफा गर्ने गरेको उनले बताए । त्यस बाहेकको समयमा अन्य फोहर फाल्ने, सार्वजनिक स्थानका झाडी फाल्ने लगायतका काम गर्ने गरेको बताए । गल्ने, नगल्ने फोहरहरु र सीसाका टुक्राहरु छुट्याएर फोहर फाल्न उनले नगरबासीलाई अनुरोध गरेका छन् । फोहर फाल्ने समयमा सिसा पनि मिसाई दिन हात काट्ने गरेको उनले बताए । उनले सडकमै फोहर फालेर जवानी बिताए । फोहर फालेर नै छोराछोरीलाई शिक्षा दिइरहेका छन् भने परिवार पाल्दै आईरहेका छन् ।
बिहानी घामको किरण शहरमा नपुग्दै विक बजार सफा गर्न पुग्ने विकलाई फोहर फाल्ने भंगी भनेर बोलाएको सुन्दा ज्यादै नराम्रो लाग्छ रे !
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका–१८ का पदम बहादुर विक पनि घोराही बजार सफा गर्न लागेको २० वर्ष पुग्न लाग्यो । उनी पनि ‘भंगी’ बाटै परिचित छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादी तथा आर्मी, पुलिसका लास गाडेको अझै सम्झिन्छन् । शुरुमा सडक बढार्न भनेर आएका सुनाएर फोहर फाल्नेदेखि लास गाड्ने समेत काम गरे । एकदिन बिरामी हुनुपर्छ वा अन्य केही कारणले सरसफाई गर्न नगएको समयमा बजारमा फोहर गन्हाएर बसि नसक्नु हुने गरेको बताए । एकदिन बिरामी भएर फोहर उठाउन नजाँदा सहरीया शिक्षित व्यक्तिले नै उनलाई फोहर उठाउन किन आएन ‘भंगी’ भन्दा निकै नरमाईलो लाग्ने गरेको उनले बताए । उनी सडकमै फोहर फाल्ने भएकै कारण उनलाई पूजा, पार्टी, सामूहिक भोजनमा जान बञ्चित छ ।
उनी अन्य व्यक्तिसरह सामूहिक भोजनमा सहभागी हुन पाउदैनन् । ‘बिहानको समयमा फोहर फालेपछि घरमा आएर दिनहँु नुहाउँछाँै, सहरको मात्रै आफ्नो शरीरको पनि सफा गर्छु’ उनले ‘तर फोहर फाल्ने व्यक्तिको रुपमा परिचित छु ।’ शहरको फोहरदेखि बानी परिसकेको उनी आफूलाई भंगी, फोहर फाल्नेभन्दा पनि चित्त नदुख्ने गरेको उनले बताए । ‘कसै–कसैले त सम्मान गर्नुहुन्छ, गल्ने नगल्ने फोहरहरु पनि छुट्याउनु हुन्छ’ उनले भने ‘तर कसैले त एकदमै तल्लो स्तरको दुव्र्यवहार गर्नुहुन्छ ।’ गरिबीकै कारण उनी सडकमा फोहर उठाउन पुगे । पढ्ने, खाने, रमाइलो गर्ने उमेरमा उनी सडकका फोहर उठाउँदाका तीतो अनुभव सम्झिन्छन् उनी । ‘घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण सडकका फोहर उठाउने काम गरे’ उनले भने ‘अनि मलाई समाजले ‘भंगी’ उपनाम दियो ।’ त्यस्तै घोराहीका कृष्ण विक पनि सरसफाईको काम गर्न लागेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । सडकमा सरसफाई काम गर्दा घरको ईज्जत फालिस् भनेर बोलीसमेत बारेको उनी सम्झन्छन् । ‘सडकका फोहर उठाउँदा हेर्ने नजर नै फरक हँुदो रहेछ’ उनले विगत सम्झदै भने ‘केही काम नपाएर फोहर फाल्न जान्छस् भनेर धेरैले हेप्ने गर्थे ।’ तर हिजोआज आफ्नो कामदेखि सन्तुष्ट छन् । बिहान सहर सफा गर्न पाउँदा उनलाई रमाइलो लाग्ने गरेको बताउँछन् । फोहरसँग बानी परिसकेको उनले बताए । घोराही उपमहानगरपालिका २२ जना सरसफाईकर्मीले सरसफाईको काम गरिरहेका छन् । उनीहरुसँग सेवा सुविधाको विषयमा कुरा वुझ्दा सन्तोषजनक भएको बताउछन् । सरसफाईकर्मीहरुलाई घोराही उपमहानलगपालिकाले सरसफाई पोशाक, पञ्जा, बुट, मास्क लगायतका सुविधाहरु दिएको उनीहरुले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाका सरसफाई ईन्चार्ज अर्जुनकुमार आचार्यले स्वीपर, डराईभर र सरसफाई ईन्चार्ज गरेर २२ जना कर्मचारी रहेको बताउँछन् । नगरबासीहरुलाई गल्ने, नगल्ने र सिसाहरु छुट्टाछुट्टै फाल्न अनुरोध गर्दा पनि धेरैले अटेर गर्ने गरेको उनले बताए । ‘सरसफाईकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नफेरिएको उनले गुनासो पोखे । सरसफाईकर्मीलाई भंगी, फोहर फाल्नेहरुको उपनाम दिईन्छ’ उनले भने ‘अरु कस्तो व्यवहार भोग्नुपर्छ तपाईहरुलाई नै थाहा छ, के भन्नु पर्छ र ?
लुम्बिनीमा कोरोनामा आधा अर्ब खर्च
२० बर्षीया सुत्केरीको कोरोनाबाट मृत्यु